विद्यालय शिक्षाका कमजोरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
विद्यालय शिक्षाका कमजोरी
आश्विन ११, २०७४ विणा झा
काठमाडौँ — ५ कक्षामा पढ्ने ११ वर्षीया बालिका विपरीतार्थक शब्दहरू जोडजोडले पढ्दै थिइन्, आमाको उल्टो बाबा, भाइको बहिनी, केटाको केटी इत्यादि । म छक्क परेँ, यी मानवीय सम्बन्धहरू कसरी एकअर्काको विपरीतार्थी हुनसक्छन् ?
यी त एकअर्काका परिपुरक हुन्, जसले परिवार बन्छ, समुदाय अनि समाज बनेको हुन्छ। अग्लोको उल्टो होचो हुनसक्छ। दायाँको विपरीतार्थी शब्द बायाँ हुनसक्छ, तर दायाँ हातको विपरीतार्थ बायाँ हात त हुन सक्दैन। किनकि शरीरलाई आइपरेको आक्रमणमा दुवै हात मिलेरै शरीरको रक्षा गर्छन्।
मानवीय सम्बन्ध, सामाजिक संस्कृतिक महत्त्वका विषयवस्तु र भौगोलिक विविधतालाई एकअर्काको विपरीतार्थी भनी सिकाउने कस्तो शिक्षा पाउँदैछन्, भावी समाज सञ्चालकहरूले? हिन्दुको विपरीतार्थ मुस्लिम वा बौद्धका विपरीतार्थ क्रिस्चियन हुनसक्छ? यिनका आआफ्नै स्थान, महत्त्व र इतिहास छन्। यिनलाई विपरीतार्थी भनी सिकाइयो भने भोलिको समाजमा एक समुदायसँंग अर्को समुदायको स्वीकार्यता कतिको बढ्ला? एक–अर्काको सम्मान सहितको स्वीकार्यता बिनाको समाज कस्तो बन्ला?
२ महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा पाठ्य–पुस्तकसँंग सम्बन्धित एउटा विषयले खुब चर्चा पाएको थियो। कक्षा ७ को नेपाली विषयको पाठ ४ को अभ्यास नम्बर ८ (पृष्ठ ३१) मा जोडा मिलाउन दिइएको मधेसीको विपरीतार्थ शब्द पहाडी भनेर कापीमा सारेर गर्ने अभ्यास। यो विषय सामाजिक सञ्जालभरि पिँmजिएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले मधेसी र पहाडी शब्द पाठ्य–पुस्तकबाट हटाएर पठनपाठन गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नुका साथै आगामी संस्करणमा संशोधन गरेर मात्रै पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो।
ती दुई शब्द मधेसी र पहाडी विपरीतार्थी होइनन्, बरु एकअर्काका परिपुरक हुन्, नेपाली समाजका लागि। तर यसरी शब्द परिमार्जन त गरियो, तर के व्यवहारगत रूपमा कक्षाकोठाभित्र पहाडी, मधेसी, जनजाति, महिला पुरुष, तेस्रो लिंगी, बाल–वृद्ध सबै एकअर्काका परिपुरक हुन् भन्ने कुरा सिकाउने प्रयत्न गरिन्छ? तिनीहरूलाई सिकाउने गुरु वा प्रशिक्षक के साँच्चै त्यसको सामाजिक मर्म बुझेका हुन्छन्? डिग्रीको आधारमा मात्रै त्यो तहमा बुझाउन सकिन्छ? कतै हामी त्यस्तो पुस्ता त तयार पार्दै छैनौं, जो आफैमा कन्फ्युज होस् र अरूको भनाइकै आधारमा आफ्नो सोच बदलिरहोस्?
अहिले हाम्रो समाजमा जताततै बेथिति र भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, जसको अनुभूति ती स्कुले विद्यार्थीले पनि गर्नु स्वाभाविकै हो। किनकि प्रविधिको पहुँच उनीहरूसंँग पनि छ। समाजका विगत र वर्तमानमा बिभिन्न सार्वजनिक पदमा आसिन पात्रहरू तथा तिनका भ्रष्टाचारका घिनलाग्दा कथाहरू उनीहरूले पनि सुन्दैछन्। विद्यार्थीले घन्टौं लामो लोडसेडिङले परेको नकारात्मक असर प्रत्यक्ष देखेका छन् अनि काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको पनि देख्दैछन्। यस्तोमा तिनलाई पाठ्यक्रममा रहेका हरिबहादुर वा श्यामबहादुरका इमानदारी र मिहेनतका कथा घोकाएर सच्चा इमानदार देशभक्त तयार गर्न सकिन्छ? विद्यार्थीले कक्षामा आफ्नो पेसाप्रति इमानदार नभएका शिक्षकहरू भेट्छ, तिनका पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरू अनुभूत गर्छ भने ऊ कसरी एक न्यायप्रेमी सामाजिक न्यायको प्रवर्तक बन्न सक्छ? उसले पढ्ने पाठ्यक्रमको कुनै पनि कथा वा कवितामा वीर मधेसी, वीर जनजाति, वीर मुसलमान वा वीर थारु भनी उल्लेख गरिएको भेट्दैन, उसका शिक्षक वा बाआमाले समेत यस्ता विषयबारे केही भन्दैनन् भने उसको मनमा ती समुदाय पनि हाम्रै नेपाली हुन्, समान सम्मानका हकदार हुन् भनी कसरी उब्जन्छ? के हामीले दिन खोजेको शिक्षा यही हो? यसले सामाजिक अन्याय र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने जनशक्ति तयार गर्ला? कि समाज ध्रुवीकरणलाई निरन्तरता दिलाउँछ? विगतमा गरिएका भुलहरूको परिणाम समाजले अहिले भोग्दैछ। के यसको अन्त्य कहिल्यै नगर्ने? कहिलेसम्म कथा र कवितामै देशभक्ति सिकाइरहने?
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। चुनावका बेला शीर्षस्थ नेतादेखि स्थानीय नेतृत्वकर्ताका अनेक प्रतिबद्धता लिखित र मौखिक रूपमा बाँडियो र बाँडिँदैछन्। तर तिनमा कतै पनि गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता यो पंक्तिकारले भेटेन। अचम्म लाग्छ, राजनीतिमा शिक्षा घुसाउनुको सट्टा शिक्षामा राजनीति घुसाइएको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले भनेका थिए, समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुछ र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुछ भने त्यसका लागि प्रमुख पात्रको रूपमा त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका बाआमालाई यस विषयप्रति गम्भीर बनाउन जरुरी हुन्छ। समाजका युवाले पढेको पाठ्यक्रम, उसका शिक्षक र उसका बा–आमाले उसलाई आफै सही, गलत छुट्याउन सक्ने बनाउन सक्दैन भने ऊ जहिले पनि बाह्य कुराले प्रभावित भैरहन्छ। गतसाता कान्तिपुरमा डा. अरूणा उप्रेतीको लेखमा उल्लेख भएझंै ज्ञानको कमी हुनेलाई वास्तविक पोषणयुक्त खानाको सट्टा आकर्षक विज्ञापनले झुक्याउँछ। व्यक्तिसँंग सही ज्ञान छ भने जतिसुकै लोभलाग्दा विज्ञापन आए पनि उसले घरको खाना मकै र भटमास नै रोज्छ।
शिक्षाले ज्ञानसंँगै मानवता भर्दैन भने त्यो व्यक्तिले जतिसुकै विश्व प्रख्यात डिग्री हासिल गरे पनि मानव हितमा ज्ञान प्रयोग गर्न सक्दैन, अनि के फाइदा समाज र राष्ट्रलाई? जुन शिक्षाले मानवता सिकाउँदैन, त्यो शिक्षा कसैको लागि उपयोगी हुनसक्दैन। यहाँनिर बुझ्न के जरुरी छ भने शिक्षाको स्रोत पाठ्य–पुस्तक मात्रै होइन। घरपरिवार, साथी, विद्यालय तथा समाजका सबै सामाजिक संगठनहरू पनि अनौपचारिक रूपमा शिक्षा दिने कार्य गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले पनि भनिन्छ नि पढाइबाट मात्रै होइन, भोगाइबाट पनि सिकाइ हुन्छ।
एउटा विद्यार्थीले पसलमा पैसा दिन्छ, अनि दूधको पोका किन्छ। त्यो दूधको पोका पसलसम्म आइपुग्ने प्रक्रिया उसलाई थाहा हँुदैन। एक किसानको योगदान र संघर्ष उसले महसुस गर्न सक्दैन। यो पर्दा पछाडिको वास्तविक चित्र देखाउने नै शिक्षा हो, जसमा एक शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर उसलाई शिक्षा दिने शिक्षकको समाजप्रतिको सम्वेदनशीलता र पेसाप्रतिको इमानदारिता जुन सर्टिफिकेटमा उल्लेख हुँदैनन्, त्यसको ग्यारेन्टी कसले, कसरी लिने? एक किसानको मिहेनत, दु:ख महसुस हुनेगरी उसले बुझेकै छैन भने भोलिको दिनमा चाहे नीति निर्माण तहमा बसोस् वा वित्तीय क्षेत्रलाई अंँगालोस् वा राजनीतिमा लागोस्, उसले किसानको हितका लागि किन र कसरी सोच्ने? सायद संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका कुरासमेत व्यवहारमा कामद्वारा आम नागरिकलाई महसुस गराउन नसक्नु यस्तै शिक्षाको असर हो कि !
त्यसैले अब अझ ढिलो नगरी हामी जहाँ जुन भूमिकामा छौ,ं त्यहींबाट सही शिक्षाको स्रोतका रूपमा अगाडि बढौं। सही सिकाइ सरल माध्यमले पिँmजाउन थालौं, जसले गर्दा हाम्रो समाजमा आउँदो पुस्ता यस्तो तयार होस्, जो मानवताले भरिएको होस्, मुटुभित्र देशको माया राखोस्, अनि मन, वचन र कर्मले इमानदार होस्, आफै सही–गलत छुट्याउन सकोस्, बाह्य प्रभावले तिनका सोच प्रभावित नबनोस्। त्यसपछि कसैले जति चाहे पनि समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा लैंगिक आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव र द्वन्द्वको ठाउँमा सामुहिक हित, राष्ट्रहितले स्थान पाउन कसले रोक्न सक्छ र !
- झा समाजशास्त्री हुन्।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:५१
नगरवासीको आस नमरोस्
आश्विन ११, २०७४ डा. ढुण्डिराज पौडेल
काठमाडौँ — २ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।
भौगोलिक एवं जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौं महानगर नै ‘न्युक्लियस’ अर्थात केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। उपत्यकाको विकास काठमाडौं महानगर एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले एकीकृत विकासको माध्यमबाट उपत्यकाका सबै इकाइबीच समन्वय राखी यातायात, ढल, पानी, फोहोर विसर्जन आदि कार्यको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।
काठमाडौं महानगरले आफूलाई मोडलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीका सपनाहरू सुनाउनु पनि नाजायज छैन। तर सूर्योदयले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो अल्पकालीन र अति आवश्यक सुधारका पाइलाहरू नचालिँंदा, जिम्मेवारहरू कुहिरोका काग बनिदिँंदा, आफू काठमाडौंका केही मतदाताको मात्रै प्रतिनिधि हुंँ भनिदिंँदाचाहिँ ४० लाख नागरिकमा निर्वाचित प्रतिनिधि र सम्बद्ध पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। अरू चुनाव त भविष्यमा सम्पन्न हुन बांँकी नै छन्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर, उपमहानगर या नगरपालिकाहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।
फोहोर व्यवस्थापन : काठमाडौंमा जम्मा हुने फोहोर ६० देखि ७० प्रतिशत सड्ने खालको भएकाले त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गरी विभिन्न प्रकारका उपयोगी वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य खासै अप्ठ्यारो छैन।
सडक, पानी, ढल, केबुल यी तीन कुराबीच पटक्कै समन्वय छैन। सडक निर्माणमा अत्यन्तै उदेकलाग्दो चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनि वर्षा सुरु हुने बेलामा सडक निर्माण या मर्मत गर्ने भन्दै भत्काइने गरिन्छ। तर त्यो अत्यन्तै कमजोर हुने गर्छ, जसको दोष लगत्तै पैदा हुने वर्षालाई दिने गरिन्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा मुलुक प्रविष्ट गरे पनि लुटतान्त्रिक प्रवृत्ति झन्–झन् घनिभूत हुँदै गएको छ।
पटक–पटक सरकार फेरिइरहनाले केही वर्षदेखि मुलुकमा विपक्षीरहित अवस्था सिर्जित भएको छ, जुन लोकतन्त्र र विकासका निम्ति प्रतिकूल छ। सार्वजनिक निर्माण या ठेक्कामा देखिने गरेका अनियमितता उजागर हुँदा पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन। राजधानीको मुटु महांकालस्थान, भोटाहिटी, असन, वीर अस्पतालको वरपर वर्षांैदेखि ढल फुटी पैदा भएको दुर्गन्धको हिँड्ने जसले पनि अनुभूति गर्छ। त्यो त उदाहरण मात्रै हो। सडक, ढल, केबुल बिछ्याउने आदि निर्माण कार्यबीच नियतवश नै संयोजन हुने नगरेको प्रतीत हुन्छ।
प्लास्टिक र हानिकारक वस्तुमाथि बन्देज : प्लास्टिक नकुहिने मात्रै नभई यसमा विभिन्न विषालु रसायन हुन्छन्। धेरै अफ्रिकी मुलुकमा प्लास्टिक वस्तुको प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। ती मुलुकमा हवाई उडानबाट जाने यात्रुलाई जहाजभित्रै यसको जानकारी दिइन्छ। नेपालमा पनि भूकम्प जानुअघि निश्चित मापनको प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लागेको थियो। जनताको हित अनुकूल हुने त्यो प्रतिबन्ध किन फुकुवा गरियो? कसको स्वार्थकाखातिर जनतालाई हानि हुने वस्तुको उपयोगमा निरन्तरता दिइन्छ?
सडकभरि जताततै भारतको विहारमा समेत प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू जस्तो– खैनी, गुट्खा आदिका खाली प्याकेटहरू देख्न सकिन्छ। सुर्तीजन्य लगायतका हानिकारक वस्तुको उपयोगको गाम्भीर्यता ती खाली प्याकेटहरूको परिमाणले स्पष्ट पार्छ। एकातिर सुर्ती, सुपारी गुट्खाजस्ता हानिकारक वस्तुहरू अनि अर्कोतर्फ तिनका खाली प्लास्टिकका प्याकेटहरूबाट सिर्जित हुने हानि गम्भीर प्रकृतिको छ।
खानेपानीको व्यवस्थापन : खानेपानी भन्ने बित्तिकै स्वच्छ र हानिकारक किटाणुरहित भन्ने बुझ्नुपर्छ। काठमाडौंका जनता वर्षौंदेखि काकाकुलझैं तड्पिइरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको निर्माणले दुई दशक नाघ्न थालिसक्यो। जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको मेलम्चीको पानी ढिलो–चाँडो आउला। तर त्यसले पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न मुस्किल छ। एकातिर आवश्यकताको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून परिणाममा खानेपानी उपलब्ध छ भने अर्कोतर्फ त्यसको दुरुपयोग हुने र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।
यातायात व्यवस्थापन : काठमाडौंको सडकको कुल लम्बाइभन्दा यहांँका सवारी साधनहरूको लम्बाइको जोड बढी छ। तत्कालै सडक फराकिलो गर्न सम्भव छैन। नयाँ सडकहरू निर्माण गर्न पनि मुस्किल छ। त्यसैले उत्तम उपाय भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो।
सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थापन, कार्यालय, विद्यालय जाँदा र आउँदाको समयमा सवारी साधनको विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटनदेखि वरपरको मार्गमा अफिस खोल्ने समयमा सवारी साधनमा एक्लै यात्रा गर्न पाइँदैन। हामीकहाँं सुविधाभन्दा पनि शान, शौकतको लागि थोत्रा, विशाल, धेरै इन्धन खपत गर्ने सरकारी गाडीमा एक्लै गजधम्म गरेर विभिन्न ओहदामा आसिनहरू सवार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गाडीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
होचा उभिन नमिल्ने माइक्रोबसहरूमा सिट संख्याभन्दा धेरै बढी यात्रुहरू कोच्चिएर अत्यन्तै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गाडी किन्न स्वीकृति दिनुअघि पार्किङको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।
बजारको व्यवस्थापन : बिहान कार्यालय समयबाट सुरु भएको सवारी साधनको चाप सांँझ पर्दासम्म धेरै खुकुलो हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समयदेखि साँझसम्मको केही घन्टाभित्र नै कार्यालयदेखि विद्यालय चल्नेमात्रै होइन, पसल, सुपरमार्केट, सपिङ मल आदिमा खरिदारी हुने गरेको छ। विदेशका सहरहरूमा मार्केटिङ सांँझदेखि राति अबेरसम्म चल्ने गरेको हुन्छ। तर हामीकहांँ साँंझ सात बजेसम्म पसलहरू समेत बन्द हुने गरेका छन्। यसको पछाडि सुरक्षाको सवाल र सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कारक हुन सक्छन्, जसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ। मासु लगायतका खाद्य सामग्री स्वस्थकर हुनुपर्छ। मिसावटको निगरानी वैज्ञानिक प्रविधिबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी केही वर्षअघि राजधानीको न्युरोडस्थित मिठाइ पसलहरूको अनुगमनमा देखिएको बेथिति अद्यावधिक छैनन् भन्न सकिन्न।
सहरी स्वास्थ्य एवं नगर अस्पताल : अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारपूर्ण महानगरपालिकाहरूले नगरबासी र विशेषगरी असहाय र गरिबहरूको स्वास्थ्योपचारप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। अझैसम्म नगर अस्पताल नरहेको स्थितिमा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँंग समन्वय राखी स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह हुनसक्छ।
केन्द्रीय सरकारको भूमिका : राजधानीमा मुलुककै १५ प्रतिशतजति स्वदेशी नागरिकमात्रै नभई विभिन्न देशका नागरिकसमेत बस्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि राजधानीप्रति विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। २० वर्षपछि स्थापित भएका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन्। यसको पुष्टि मतदानमा देखिएको सहभागिताले गर्छ। तर जनताको त्यो आशामा तुषारापात गरिनुहुन्न, जनतालाई निराश बन्न नदिनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४७